Al Shabaab Oo Si Adag isaga Difaacay Weerar ay Ciidamo Mareykan ah ku qaadeen Degmada Gamboole Ee Sh/dhexe.
Friday March 08, 2019 - 11:07:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya isku day weerar oo ciidamo Mareykan iyo Bangaraaf ah ku qaadeen deegaan katirsan gobolka Shabeellaha dhexe.
sawir hore ciidamada Shabaabul Mujaahidiin
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa si adag uga hortagay isku day weerar oo ciidamo huwan ah ku qaadi lahaayeen degmada Gamboole oo qiyaastii 50 Km dhanka galbeed uga beegan magaalada Jowhar ee xarunta Sh/dhexe.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Mareykanka oo diyaarado wata ay ku degeen duleedka degmada kadibna ay isku dayeen in ay falal arbushaad ah ugeystaan guryaha shacabka balse ciidamo katirsan Al Shabaab oo sida muuqata ka warqabay dhaq dhaqaaqa cadowga ayaa jilbaha u aastay.
Dagaal culus ayaa mujaahidiinta iyo ciidamada huwanta ah ku dhaxmaray afaafka hore ee Gamboole, khasaara lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa la sheegay in ciidamada Mareykanka iyo maleeshiyaadka Bangaraafta uu kasoo gaaray dagaalkii Xalay.
Ciidamada Mareykanka ayaa la sheegay in ay dileen laba qof shacab ah oo xilligaas usoo hoyaadayay guryahooda oo magaalada kuyaal, dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada huwanta ah ay Meydad iyo dhaawacyo ka jiiteen goobta lagu hardamay iyagoo duqeymo umuuqday raacda reeb ka geystay duleedka degmada Gamboole.
Saaka markii uu waagu baryay ayaa goobta dagaalka lagu arkay dhiig dhulka daadsan iyo faashado astaan u ahaa in khasaara uu gaaray soo duulayaasha, wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xaaladdu tahay mid deggan waxayna dadku hadal hayaan dagaalkii xalay dhacay.
Habeen hore ayay sidaan oo kale maleeshiyaadka Bangaraafta loo yaqaan ee Mareykanku tababaray waxay weerar ugu qaadeen tuulada Busleey ee hoos timaad degmada Janaale halkaas oo ay dad shacab ah ku waxyeelleeyeen islamarkaana ay ku burburiyeen guryo shacab.
Dadka tuulada oo u badan xoola dhaqato iyo beeraley ayaa sheegay in laga dhacay lacago boqollaal dollar ah iyo qalab ay kamid yihiin telefoonada gacanta. Sawirrada deegaanka lagasoo qaaday waxaa laga dheehan karayaa guryo albaabadooda ay jabiyeen maleeshiyaadka.
Jabinta albaabada ayaa waxay u adeegsanayeen qaraxyo miinooyin ah oo sas iyo cabsi ku beeray caruurta iyo waayeelka deegaanka . Ciidamada Bankaraf waxaa la socday kuwa caddaan ah waxaana oobta uga tageen qalab u muuqda inuu yahay walxa qarxa.
Mareykanka ayaa markii hore ku andacoon jiray inuu Al-Shabaab la dagaalamayo laakin hadda waxaa muuqata in uu si toos ah ubeegsanayo shacabka reer Miyiga ah sida xoola dhaqatada iyo beeralayda.
Hoos Ka Daawo Sawirrada dhibaatada ay maleeshiyaadka Bangaraafta ka geysteen tuulada Busleey.